Sheekh Umal oo ka hadlay sida looga hortaggi karo afduubka Soomaalida. | Warbaahinta Ayaamaha
Sheekh Umal oo ka hadlay sida looga hortaggi karo afduubka Soomaalida.
MUQDISHO-AYAAMAHA-Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo ka mid ah culimada Soomaalida ayaa si weyn uga hadlay falalkii afduubka ahaa ee dhawaan ka dhacay Nairobi iyo Mombasa, wuxuu shacabka u soo jeediyay talooyin ku aadan sidii ay iskaga dhowri lahaayeen afduubka.
Sheekh ayaa ka hadlay waxyaabaha la is dhihi karo wey ka dambeeyaan afduubka.
Kufsiga – Sheekh Maxamed Cabdi Umal wuxuu sheegay in tacadiyadda dhanka jinsiga iyo kufsiga haweenka iyo in gabdhaha loo afduubto in shahwada laga guto ay keeni karaa afduubka.